तेस्रो धारका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अब दास बन्नुको बिकल्प छैन | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार ११:०७
तेस्रो धारका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अब दास बन्नुको बिकल्प छैन
HT २०७८ भाद्र ८, मंगलवार ११:०७
डा.खिमलाल देवकोटा ।
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई दूर्भाग्य भनेको र यसको देशव्यापी भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका तेस्रो धारका नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई महान् र ऐतिहासिक भनेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन जालसाँझ र अपराध थियो भन्ने धारणा समेत उनीहरुको थियो/छ ।
अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई दूर्भाग्य भन्ने र ऐतिहासिक उपलव्धि ठान्नेका बीचको मिलनविन्दु कसरी र कहाँनेर हुन्छ ? विपरीत ध्रुवका यी दुई धार सँगसँगै जानसक्लान् ?
निश्चित छ । सक्दैनन् । ऐतिहासिक उपलव्धि ठान्नेले ऐतिहासिक भूल भयो भन्नैपर्दछ ।
असहमतिका अरु पनि प्रशस्तै मुद्धाहरु छन् । पहिला विचारमा सहमति/एकरुपता नभएसम्म भागवण्डामा रमाउनु÷मिलाउनु को कुनै अर्थ छैन । घनश्याम भुसालका विचारका सारका आधारमा नै भन्ने हो भने तेस्रो धारका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अब दास बन्नुको बिकल्प छैन । मैले देख्दिन । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट एकल नेतृत्व जस्तो संविधानको भावना विपरीतको निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने निर्णयलेनै सन्देश दिइसकेको छ । अब तिमीहरु सबै मेरै वरिपरी घुम्ने हो । पूजापाठ गर्ने हो । राममन्दिर बनाउने हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको धर्ना
Spread the loveकाठमाडौँ । क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलबार बिहानैदेखि पार्टी कार्यलयमा पुगेर उनीहरुले नामावाली सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । सोमबार राति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले क्रियाशील […]
२०७७ माघ ५, सोमबार ०७:०१
राष्ट्रपतिको आदेशमा मात्रै संसद पुनःस्थापना वा सूचारू हुनसक्छ
२०७७ पुष २, बिहीबार १७:४४
पुस्तक समीक्षा ‘प्रयोगशाला’
२०७७ चैत्र २०, शुक्रबार १३:३२
ओलीको सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक कार्यप्रणाली नै अधिनायकवादी प्रकारको छ
२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार ११:५४
‘म मरेको घोडालाई चाबुक हान्न चाहन्न’ भन्ने वीपीको भनाई र यो संविधान
२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार १६:५३
बहुपक्षीयवाद बृहत् विश्व हित र विधिमा आधारित व्यवस्थाका निम्ति हुनुपर्छः केपी शर्मा ओली